Ady amin’ny kolikoly : vonona ny paikadim-pirenena, fanatanterahana sisa… (NewsMada) | AEMW
Ady amin’ny kolikoly : vonona ny paikadim-pirenena, fanatanterahana sisa… (NewsMada)
Amin’ny taona 2025, ho fanjakana tan-dalàna i Madagasikara ary ho afaka amin’ny kolikoly ny fampandrosoana ara-toekarena, sosialy ary tontolo iainana. Izay no tanjona amin’ny Paikadim-pirenena iadiana amin’ny kolikoly (SNLCC). Hatolotra amin’ny fomba ofisialy amin’ireo mpisehatra amin’ny ady amin’ny kolikoly izany paikady izany eny Andrainarivo, rahampitso.
Amin’ny fanatanterahana io paikady vaovao io miaraka amin’ny mpisehatra voakasik’izany, ny mpanapa-kevitra eto amin’ny firenena hatramin’ny olom-pirenena: mahazo manantena i Madagasikara fa ho afaka amin’ireo vondron-tany tena ianjadian’ny kolikoly any amin’ny taona 2025, ary hahazo isa 60/100 amin’ny fanombanana ny ady amin’ny kolikoly, raha ny filazan’ny Bianco.
Fanentanana ny minisitera, ny firaisamonina sivily, ny mpiara-miombon’antoka ara-teknika sy vola ary ny haino aman-jery ny amin’ny anjara toeran’izy ireo tokony hohajaina ao anatin’ny fanatanterahana io paikady io. Izay no tanjon’ny fanolorana ny paikady, iarahan’ny minisiteran’ny Fitsarana, ny Komity ho amin’ny fitandroana ny fahitsiana (CSI), ny Bianco, ny Samifin, ary ny minisiteran’ny Fitantanam-bola sy ny tetibola, tohanan’ny Pnud.
Vokatry ny fakan-kevitra ny paikady
Vokatry ny fakan-kevitra nivelatra hatreny anivon’ny distrika sy ny faritra io tetikady io. Manaraka izany ihany koa ny fandaharanasa fanatanterahana, nakana ny hevitry ny mpisehatra samihafa: administrateram-panjakana, tomponandraiki-panjakana, sehatra tsy miankina, firaisamonina sivily…
Mampisongadina ny andraikitra sy ny asan’ireo mpisehatra amina tanjona telo sy sehatra sivy ho laharam-pahamehana ny fandaharanasa. Nanampy ny Pnud tamin’ny fandrafetana ny SNLCC, izay natolotra ofisialy ary nanaovan’ny filohan’ny Repoblika amin’ny fanatanterahana azy, ny 21 septambra 2015.
@dmin August 31, 2016 NewsMada No Comments
← Tselatra (NewsMada)
Efa nigadra teny Antanimora… : saron’ny polisy teny Ilanivato i Pato sy ny namany (NewsMada) →